I-Sunset View Ranch 5-Indlu yokulala - I-Airbnb
I-Sunset View Ranch 5-Indlu yokulala
Perry, Iowa, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Robert
Lo mcabango ovunguzayo we-Sunset View Ranch unokuthile nje noma yimuphi umndeni ongakufuna ngempelasonto ukuze uphumule! Kunamakamelo okulala ayi-5 okulala abantu abayi-10 ngokukhululeka noma abangashadile abayisi-6. Ikhishi elifakwe ngokugcwele.
Amahektha angu-2 wendawo evulekile yezingane, okuhlanganisa nenkundla yebhasikithi encane yokudlala.
Sikwenze umgomo wethu ukwenza isiqiniseko sokuthi izivakashi zethu zihlala endaweni enempilo. Ingaphakathi lendlu liyahlanzwa futhi libulawe amagciwane njalo ngoMsombuluko noma ngemva kokuhamba kwezivakashi zethu.
Amakamelo omndeni amabili anegumbi lokuhlala elisemthethweni ukubuka kokubili ukushona nokuphuma kwelanga nokubuka i-TV. Amakamelo okulala ayi-5 anemibhede eyi-6 isiyonke kanye namasofa ama-3. Ikhishi elikhulu lokudlela kanye negumbi lokudlela. Indawo enkulu yangaphandle engamahektha angu-2 enamadekhi amabili kanye negceke elikhulu eline-pergola. 12 Umthamo wesivakashi. 6 ngesilinganiso esiboniswe ohlwini $20 ngomuntu ngamunye ngemva kuka-6.
4.91 · 96 okushiwo abanye
Le acreage itholakala ezweni eliqhele ngemayela nje nePerry futhi ingaphansi kwemayela ukusuka ezitolo nasezindaweni zokuthenga edolobheni lasePerry. Inikeza idolobha elinomlando elinehhotela elidumile elithi Pattee, Carnegie Library kanye nezitolo zobuciko. Indlu iseduze neRaccoon Valley Bike Trail edume kakhulu. Futhi sikude ngemizuzu eyi-15 komunye umzila wamabhayisikili odumile, i-Trestle Bike Trail ene-Trestle Bridge edumile. Le ndawo inikezela nge-kayaking eMfuleni iRaccoon, ukuhamba kweqhwa nokuzingela phakathi nesizini.
Ababungazi bazotholakala uma kudingeka kodwa ngeke batholakale lapho kungenwa.